प्रयोगशालाको नयाँ मोड्युल छ, यति धेरै टेस्ट ट्यूब वा पाइपेटहरू डराउन आवश्यक पर्दैन Xipingzhe
प्रयोगशालामा सबैभन्दा सर्वव्यापी चीज पाठ्यक्रमका विभिन्न प्रयोगात्मक पोतहरू हुन्। बोतल र क्यान, बिभिन्न स्पेसिफिकेशन्स, र बिभिन्न प्रयोगहरूले सफा गर्ने कर्मचारीलाई नोक्सानमा पार्दछन्। विशेष गरी गिलासवेयरमा पाइपटेस र टेस्ट ट्युबहरू सफा गर्दा मानिसहरूलाई सधैं सचेत बनाउँदछ। धेरै प्रयोगशालाहरू अझै पनि कांचको माल सफा गर्ने कुरामा निर्भर छन्, त्यहाँ यस प्रक्रियामा लगातार गल्तीहरू वा कम दक्षताहरू छन्।
एक्सपीजेड कम्पनीले अब पिपेट र ट्यूब ब्याच सफाई, बहु-स्पेसिफिकेशन सफाईका लागि दुई नयाँ टोकरीहरू सुरूवात गर्‍यो, यो आशामा कि यी दुई टोकरीहरूमार्फत प्रयोगशालाहरूलाई सफलतापूर्वक सफा गर्न मद्दत गर्न सक्छ र एक पटकले अझ गिलासवेयर सफा गर्न सक्दछ।
यो सबैलाई राम्रोसँग थाहा छ कि धेरै जसो प्रयोगशाला वातावरण अत्यन्त जटिल छ - या त क्र्याम्ड वा इंटरलेस्ड। यसले प्रयोगशालाका कर्मचारीहरूमा अनावश्यक दबाब दिन्छ। विशेष गरी पिपेट र टेस्ट ट्यूबसँग मिल्दोजुल्दो त्यस्ता गिलासवेयर केवल कमजोर मात्र होइन तर धेरै पटक प्रयोग गरिन्छ। यसको मतलब तिनीहरू भण्डारण गरिनु पर्छ र थप सावधानीका साथ सार्नु पर्छ।
थप रूपमा, यस्ता गिलासवेयरहरूको स often्ख्या प्रायः ठूला हुन्छन्, सफाका लागि ग्लासवेयर धुनेमा उनीहरूको ढुवानी अघि र पछाडि सम्बन्धित कर्मचारीहरूले दक्षता र सरसफाइका सवालहरूमा ध्यान दिनु पर्दछ। तर यी दुई मागहरू प्रायः विरोधाभासहरू हुन्छन् र समाधान गर्न गाह्रो हुन्छ।
यहाँ, XPZ कम्पनीले कसरी आफ्नो नयाँ बास्केटहरू प्रयोग गर्दछ त्यसले कसरी दुबै तरीकाले प्रयोग गर्न सक्छ भनेर हेरौं।
वस्तु १: इन्जेक्शन पिपेट मोड्युलको लागि टोकरी
यो एफए- Z11 को समग्र उचाइ 37 373 एमएम, चौडाई 8२MM एमएम, र व्यास दूरी 55MMMM एमएम छ। आधार रोलरले सुसज्जित छ, जुन शीशवेयर धुनेरबाट पुश-पुल र ढुवानीको लागि उपयुक्त छ।
सामान्यतया, प्रयोगशालामा सुसज्जित गिलासवेयर धुने डबल-लेयर सफाई हुन्छ, र पिपेटको उचाइ C 46 सेमी भित्र सफा गर्न सकिन्छ। वर्तमानमा, पाइपेटहरू सफा गर्न दुई तरिकाहरू छन् जुन C 46 सेमी भन्दा माथि छ। पहिलो तरीका भनेको तीन-लेयर फ्ल्याश मोडेल किन्नु हो। दोस्रो तरिका छोटो म्यानुअल सफाई कायम राख्ने। XPZ कम्पनीले राम्रो प्रयासको साथ राम्रा उत्पादनहरू डिजाइन गर्यो र टेक्नोलोजिकल ईन्भेभलहरू गरिरहन्छ। अब, यो पिपेट सफा गर्ने टोकरीले पिपेट सफा गर्ने समस्या प्रयोगकर्ताहरूका लागि उच्च विशिष्टताको समस्या समाधान गर्न सक्छ - संरचनाको तीन प r्क्तिहरू विभिन्न विनिर्देशहरूको पाइपेट राख्न प्रयोग गरिन्छ, पिपेट र पानी इनलेट सफाईको बेला नजिकको सम्पर्क बनाउँदछ। पहिलो अधिकतम सफाई उचाइ प row्क्ति 5050० एमएम हो, जुन १०-११० एमएल विशिष्टताका १० पिपेटहरू राख्न प्रयोग गर्न सकिन्छ; दोस्रो प row्क्तिको अधिकतम स्पेस उचाइ MM०० एमएम हो, जुन १०-२5 एमएल स्पेसिफिकेशनको १ pip पिपेटहरू समात्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। तेस्रो प row्क्तिको अधिकतम उचाइ। 4040० एमएम हो, जुन १ १-१० मिलिट पिपेट होल्ड गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। अर्को शब्दमा, इंजेक्शन पिपेट मोड्युलको टोकरी राम्रोसँग डबल-लेयर सफाई बोतल धुनेर र बिल्ट-इन ग्लासवेयर धुनेमा लागू गर्न सकिन्छ। यो पिपेटको लागि उपयुक्त छनौट गर्नुहोस् प्रयोगकर्ताहरूका उच्च विनिर्देशन सफाई आवश्यकताहरूको साथ।
वस्तु २: क्वार्टर टोकरी
टेस्ट ट्यूब, केन्ट्रिफ्यूज ट्यूब, कलरमेमेट्रिक ट्यूब, केन्द्रापसार ट्यूब सामान्यतया चिकित्सा र रसायनिक, मापन र परीक्षण संस्थामा प्रयोग गरिन्छ।
प्रयोगशालामा, परीक्षण ट्यूबलाई अभिकर्मक प्रतिक्रिया कन्टेनरको एक थोरै मात्राको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, म्यानुअल सफाईले प्राय: मानक सफाई प्राप्त गर्न टेस्ट ट्यूब ब्रशको प्रयोग गर्नु आवश्यक हुन्छ; जब सेन्ट्रिफ्युज ट्यूब म्यानुअल रूपमा सफा गरिन्छ, फोहोर र धूलो हटाउन ब्रशको प्रयोग गर्नुपर्छ। , र त्यसपछि सफा पानीले कुल्ला। कलरमेमेट्रिक ट्यूब समाधानको एकाग्रता मापन गर्न र कन्ट्रास्ट द्वारा रंग भिन्नता अवलोकन गर्न प्रयोग गरिन्छ। ध्यान दिनुहोस् सफाईको समयमा पाइपको भित्तालाई नष्ट नगर्नुहोस्, जसले यसको प्रसारणलाई असर गर्दछ।
म यी ट्यूबहरू ठूलो मात्रामा कसरी धुन्छु? समस्या छैन!
यहाँ वर्णन गरिएको उत्पाद क्वाटर टोकरी हो (T-401/402/403/404), विशेष गरी त्यस्ता परिस्थितिहरूको लागि डिजाइन गरिएको हो। यसको समग्र आकार २१8 एमएम चौडा छ, व्यास २१ 21 एमएम हो। उचाई १०० / १२7 / १ 187 / २0० मीमी चार प्रकारको उचाइ हो, विभिन्न र उच्च ट्युबहरूको समाधान गर्न सक्दछ। एक बास्केटले एक पटकमा प्रशोधन हुन २०० ट्यूबहरू समात्न सक्छ। एक अर्काबाट अलग गरिएको विभिन्न विशिष्टताहरूको चार टोकरी रैक, विभिन्न उचाइका भाँडाहरू सफा गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ; प्रत्येक क्वार्टर टोकरीमा कभर राखिएको छ (सफा गर्ने क्रममा कन्टेनरबाट बाहिर कडा पानी रोक्नको लागि) जसले सफाई परिणामलाई असर गर्छ। उही समयमा, त्यहाँ भित्री क्षेत्रमा बिभिन्न क्षेत्रहरू छन् जुन विभिन्न ट्युबहरू सफा गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
प्रत्येक उचाई टोकरीको वर्णन प्यारामिटरहरू निम्नानुसार छन्:
पहिलो आधा टोकरी १०० मिमी उच्च, २१8 एमएम चौडा, र २१ 21 मिमी व्यास छ। राखिएको अधिकतम परीक्षण ट्यूब साइज १२ * MM 75 मिमी छ;
दोस्रो आधा टोकरी १२7 मिमी उच्च, २१8 एमएम चौडा, र २१ 21 मिमी व्यास छ। अधिकतम परीक्षण ट्यूब आकार १२ * १० 105 मिमी छ;
तेस्रो आधा टोकरी १77 एमएम उच्च, २१8 एमएम चौडा, र २१8 मिमी व्यास छ। अधिकतम परीक्षण ट्यूब आकार १२ * १ 165 मिमी छ;
चौथो आधा टोकरी २0० एमएम उच्च, २१ 21 एमएम चौडा, र २१8 मिमी व्यास छ। अधिकतम परीक्षण ट्यूब आकार १२ * २०० मिमी छ।
कल्पना गर्नुहोस् कि प्रयोगशालाले टेस्ट ट्यूबहरू धुने सहायक कार्य गर्नुपर्‍यो, यो निस्सन्देह अझ प्रभावकारी र सजिलो हुनेछ। किनभने प्रत्येक चौथाई टोकरीले १००-१60० भाँडा माझ्न सक्छ; जबकि हाम्रो अरोरा श्रृंखलाले एक पटकमा त्यस्ता quarter क्वार्टर बास्केटहरू राख्न सक्छ, र हाम्रो राइजिंग श्रृंखलाले एक पटकमा १२ क्वाटर बास्केटहरू समात्छ।
माथिका दुई नयाँ बास्केटहरू अभिनव रूपमा ह Hang्जाउ Xipingzhe उपकरण टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड द्वारा डिजाइन गरिएको हो। यी दुई टोकरीहरू मुख्य रूपले अन्तर्राष्ट्रिय उच्च-स्तरीय 316L स्टेनलेस स्टीलको बनेका छन्। तिनीहरू गैर-विषाक्त र स्वादहीन, उच्च तापमान, क्षय, र स्लिम मोल्ड प्रतिरोधी छन्, र दीर्घकालीन आन्दोलनको प्रतिरोध गर्न सक्छन्। ह्यान्डलिंग, उच्च तापमान कीटाणुशोधन, उच्च-दबाव स्प्रे र अन्य कार्यहरू। यदि तपाइँको प्रयोगशालाले समय, श्रम, ठाउँ, पानी, बिजुली, र अपरेटरहरूको सुरक्षा बचाउन चाहान्छ भने, यसलाई नबिर्सनुहोस्!